Global Voices teny Malagasy » Ho an’ireo fianakaviana Kiobàna monina any ivelany , manova ny zava-drehetra ny aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Septambra 2018 14:22 GMT 1	 · Mpanoratra Periodismo de Barrio Nandika (en) i Laura, Gwenaëlle Lefeuvre, Liva Andriamanantena
Sokajy: Amerika Latina, Karaiba, Kiobà, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
Fanavaozan-dahatsoratra nivoaka tao amin'ny Periodismo de Barrio  ity lahatsoratra ity. Amin'ny teny Espaniola ny rohy raha tsy misy fanamarihana manokana.
“Zokilahy a,” hoy ny iray tamin'ireo lehilahy, “tsara ireo kiraro nalefanao fa tsy tahaka ireo atinakanjo ambony miloko. Aza adinoina fa tokony ho vaovao sy fotsy ny rehetra .” Ity lehilahy ity dia mila akanjo hanombohany ny santero, mafana fo amin'ny fivavahana santería [fr] . Nampanantena ny hitady izay ilainy ny rahalahiny. “Mbola misy zavatra maro tsy hitako noho ny fiteny,” hoy izy nanazava.
Re eny amin'ny zaridaina rehetra misy Wi-Fi manerana an'i Kiobà ny resadresaka toy izany. Araka ny Foibe misahana ny fanisana ny mponina (CEDEM)  ao amin'ny Oniversiten'i La Havane, manana fianakaviana any ivelany ny Kiobana iray amin'ny telo. Naminavina  ny mpahay toekarena sady manampahaizana manokana momba ny fanisana ny mponina ao amin'ny CEDEM Juan Carlos Albizu-Campos fa ho very mponina miisa 40.000 mahery isan-taona hatramin'ny taona 2030 i Kiobà, amin'ny mponina miisa 10 tapitrisa.
Amin'ny tranga maro, ny mpifindra monina no mpanohana ara-bola ireo fianakaviany mijanona ao amin'ny fireneny. Nilaza ny Havana Consulting Group , any Miami, fa 3 tapitrisa euros no nalefa tany Kiobà avy any Etazonia tamin'ny taona 2017.
Ankehitriny, toerana miisa 635 no misy Wi-Fi maimaimpoana  ho an'ny vahoaka any Kiobà, ary fifandraisana vaovao sambany ahafahan'ny fianakaviana mifandray izany.
Nanazava i Rosa fa te hahita ny zava-drehetra izy, toy ny hoe tany an-toerana niaraka tamin'ny zanany lahy. “Asehoy ahy ny tranonao, ny efitranon'ny ankizy, izay ao anaty vata fampangatsiahanao,” hoy izy taminy. Nihomehy izy mba tsy hitomaniany, satria na dia mahatsiaro ho sambatra aza izy dia tsy nieritreritra afa-tsy ny fotoana hiverenan'ny zanany lahy izay niala tany Kiobà tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Tamin'ny voalohandohan'ny taona 2018, nanambara ny governemanta  fa mety hahazo alàlana hiverina ny olom-pirenana Kiobana nifindra monina tsy ara-dalàna, ary ahitàna ireo nitsoaka an-daharana rehefa tonga tany ivelany, toy ny dokotera sy ny mpanao fanatanjahantena ity fepetra ity.
Tamin'ny taona 2015, afaka nifandray tamin'ny alàlan'ny toerana misy Wi-Fi ihany ny mponina Kiobana rehefa nanambara ny famoahana ny Wi-Fi miisa 35 ho an'ny daholobe  ny mpanome tolotra Empresa de Telecomunicaciones SA (ETECSA) ao Kioba. Tamin'ny volana Desambra 2017, nanambara ny fampidirana ireo tolotra aterineto  ho an'ny finday ho an'ny taona 2018 ny ETECSA .
Mitentina 1 CUC isan'ora  ny fifandraisana amin'ny Aterineto amin'izao fotoana izao, izay misondrotra hatrany, raha oharina amin'ny karaman'ny Kiobana amin'ny ankapobeny isam-bolana izay 30 CUC.
Niresaka tamin'ity vehivavy ity izahay tatỳ aoriana ary fantatra fa monina any amin'ny faritr'i Broward, Florida ny zanany lahy 17 taona. Talohan'io andro io ihany dia nisy fifampitifirana nitranga tao amin'ny lisea  Marjory Stoneman Douglas  izay nahafatesana mpianatra miisa 17. Mianatra any amin'ny lisea hafa ny zanany lahy, saingy taitra izy rehefa nandre ny vaovao. Te-haheno ny feony fotsiny izy .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/09/03/125566/
 Foibe misahana ny fanisana ny mponina (CEDEM): http://www.cubadebate.cu/especiales/2016/09/26/cuba-y-la-emigracion-el-duro-vuelo-de-las-golondrinas
 635 no misy Wi-Fi maimaimpoana: http://www.etecsa.cu/internet_conectividad/areas_wifi/
 nanambara ny governemanta: https://www.cibercuba.com/noticias/2017-10-29-u1-e73624-cubanos-emigraron-ilegalmente-podran-regresar-isla
 famoahana ny Wi-Fi miisa 35 ho an'ny daholobe: http://www.juventudrebelde.cu/suplementos/informatica/2015-06-17/wifi-en-el-ambiente
 fampidirana ireo tolotra aterineto: http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/12/29/etecsa-asegura-que-habra-servicio-de-internet-para-moviles-en-2018/
 1 CUC isan'ora: https://www.reuters.com/article/us-cuba-internet/enthused-by-wi-fi-hotspots-cubans-clamor-for-more-internet-access-idUSKBN1CS1V0
 fifampitifirana nitranga tao amin'ny lisea: https://www.nytimes.com/2018/02/14/us/parkland-school-shooting.html